ကွန်းဇော် အညာမြေ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ကွန်းဇော် အညာမြေ's Apps
ကွန်းဇော် အညာမြေ's Likes
ကွန်းဇော် အညာမြေ's Groups
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
phyuthi သည်ကွန်းဇော် အညာမြေကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည် ကွန်းဇော် အညာမြေ's၏ 'တရားသမားကြီး ကျနော်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"https://www.facebook.com/koonzaw.anyarmyay/posts/241354346019410 ဒါလေးက ရေးခဲ့တာကြာပီဆိုတော့ မနဲပြန်လာရှာရတယ်။ ကျနော့် ဖေ့စဘုတ်မှာလည်း ပြန်တင်ထားပါတယ်။"
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည်profileကိုပြုပြင်သွားသည်။
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်ကွန်းဇော် အညာမြေကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ..."
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည် A BuddhismworldAdmin's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသားများအဖွဲ့' အဖွဲ့တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ကွန်းဇော် အညာမြေ joined A BuddhismworldAdmin's group
Hnin Pwint သည် ကွန်းဇော် အညာမြေ's၏ 'တရားသမားကြီး ကျနော်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဟားးးးး အခုလို အမှန်ကို ၀န်ခံပေးလို့ ကျေးဇူးနော် .. Brother!"
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည် အရှင်ဝိမလဝံသ's၏ 'လောဘနှင့်ဆန္ဒကွာခြားပုံ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အင်း ဟုတ်တယ် Hnin Pwint မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း တထေရာတည်းပါပဲဗျာ။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် တစ်ခါ တော့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ခဲ့မိပါသေးတယ် (အဲ. . . တကယ်လဲ သူက သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ လှတယ်ဗျ) ။ အော် . . လူ့စိတ်များ မျောက်စိတ်အတိုင်းပဲ ဆိုတာ…"
နှစ်သစ် သည် ကွန်းဇော် အညာမြေ's၏ 'တရားသမားကြီး ကျနော်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဘုရားတရားသမားကြီး နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘုရားဦးချရှိခိုးကာ၊ စိတ်ကိုမနည်းထိန်းလို့၊ ပြန်လာတယ်လို့ထင်တယ်... (မှတ်ချက်။ ။ ဘေး ကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကို ကြည့်လိုက်တယ်မှတ်လား...)"
kyawsan သည် ကွန်းဇော် အညာမြေ's၏ 'တရားသမားကြီး ကျနော်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဘုရားကိုဦးချပြီး ပြန်လာတယ်လေ။။ မဟုတ်ဘူးလားဗျာ။။"
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။
သိပ်တော့မကြာသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ မှတ်မှတ်ရရ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၇) ရက် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ ကျနော်တို့ မြို့လေးရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ မိုးမြူငွေ့တွေနဲ့ မှိုင်းဝေနေလေရဲ့။ မိုးကတော့ ရွာမနေဘူးလေ။ ည (၇)နာရီလောက်ဆိုတော့ရာသီဥတု ကလဲ အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ နေလို့ကောင်းနေတယ်။မုံရွာမြို့လေးရဲ့ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားပရိဝုဏ်ကလဲ ဘုရားဖူးလာသူတွေ၊ အပန်းဖြေလာသူတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ စည်ကားနေတယ်လေ။ အဲဒီထဲမှာ ...ကျနော်လဲ ပါတာပေါ့။ကျနော်လဲ ဘုရားကိုပန်းကပ်ပြီး ရွှေစည်းခုံဘုရားရဲ့ တရားထိုင်ဖို့ သပ်သပ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ တရားထိုင်တယ်။ အခန်းထဲမှာ…See More
ကွန်းဇော် အညာမြေ သည် စန္ဒာ's၏ 'Sunday Dhamma School ဖြစ်ပေါ်လာရေး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကျနော်လဲ နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမယ်ဗျာ. . . ."
ကွန်းဇော် အညာမြေ replied to စန္ဒာ's discussion 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ တရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားအသိပေး ကြေငြာခြင်း'
ကွန်းဇော် အညာမြေ's Blog
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 8, 2011 တွင်1:32pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments 1 Like
သိပ်တော့မကြာသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ မှတ်မှတ်ရရ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၇) ရက် ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ ကျနော်တို့ မြို့လေးရဲ့ ကောင်းကင်ယံမှာ မိုးမြူငွေ့တွေနဲ့ မှိုင်းဝေနေလေရဲ့။ မိုးကတော့ ရွာမနေဘူးလေ။ ည (၇)နာရီလောက်ဆိုတော့ရာသီဥတု ကလဲ အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ နေလို့ကောင်းနေတယ်။
မုံရွာမြို့လေးရဲ့ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားပရိဝုဏ်ကလဲ ဘုရားဖူးလာသူတွေ၊ အပန်းဖြေလာသူတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ စည်ကားနေတယ်လေ။ အဲဒီထဲမှာ ...ကျနော်လဲ ပါတာပေါ့။
ကျနော်လဲ ဘုရားကိုပန်းကပ်ပြီး ရွှေစည်းခုံဘုရားရဲ့ တရားထိုင်ဖို့ သပ်သပ်ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာ တရားထိုင်တယ်။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
5:47pm အချိန်သြဂုတ် 24, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:25pm အချိန်သြဂုတ် 24, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:46pm အချိန်သြဂုတ် 24, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ...
1:23pm အချိန်စက်တင်ဘာ 19, 2011, တွင် စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။